I-Apple iPhone 7 Plus Evava Ikhava Yomhlangano Womnyango China Manufacturer
Incazelo:Ikhava ye-iPhone 7 Plus Emuva,Umhlangano we-Cover 7 Plus we-IPhone,IPhone 7 Plus Housing Assembly
Home > Imikhiqizo > I-iPhone Assembly Assembly > I-iPhone 7/7 Plus Assembly Assembly > I-Apple iPhone 7 Plus Evava Ikhava Yomhlangano Womnyango
Apple iPhone 7 Plus Cover Emuva Cover Assembly Housing Replacement
Wonke ama-housings afaka i-logo logo ye-Apple nezinye izithonjana ze-OEM. Konke kufana ne-OEM Housings eze nezinkinobho kanye ne-SIM card tray.
Lezi azikho ama-OEM housings. Lezi yizona zokuhlala ezitholakalayo ezitholakala emakethe yomphakathi. Ama-OEM housings awakho kusuka kubathengisi benkampani yangaphandle, kuphela ngokuqondile kusuka ku-Apple.
Uma unemibuzo noma ukukhathazeka mayelana nokufuna umbala noma imodeli esingaqhubeki okwamanje, noma yini enye, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi futhi sizophendula kuwe ASAP
Izigaba zomkhiqizo : I-iPhone Assembly Assembly > I-iPhone 7/7 Plus Assembly Assembly
Ikhava ye-iPhone 7 Plus Emuva Umhlangano we-Cover 7 Plus we-IPhone IPhone 7 Plus Housing Assembly Ikhava le-iPhone 8 Plus Emuva Ikhava ye-IP 6 Plus Emuva I-iPhone 7 Plus Cover Emuva Icala le-iPhone7 Plus I-iPhone 6S Plus Cover Emuva